Bọọgụ Juan Herranz
akụkọ ndị e bipụtara na magazin
Magazin akwụkwọ edemede "ragora". 2004. Nkọwa: Víctor Mógica Tụnyere.
Ị nwere ike ịchọta kaadiboodu kacha mma; Ozugbo etinyere mmetụta mmanya ahụ ma ị nwee mmetụta ka ice na -arapara n'ahụ azụ gị ọzọ, kaadiboodu ahụ nke ị chọsiri ike na -akwụsị gafee n'ime blanket dị mma ka ọ bụrụ ọnụ ụzọ friji. Ma ị nọ n'ime friji, ahụ e meriri gị bụ hake owu na -echekwa na abalị gbara ọchịchịrị.
Agbanyeghị na m na -agwakwa gị otu ihe, ozugbo ị na -adị ndụ na friza mbụ ị gaghị anwụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe kacha masị gị. Ndị nkịtị na -eche otú anyị si adị ndụ n'okporo ámá n'oge oyi. Ọ bụ iwu onye kacha ike, onye kachasị ike n'etiti ndị na -adịghị ike.
Mmụọ nke ọkụ
Magazin akwụkwọ edemede "ragora". 2006. Nkọwa: Víctor Mógica Tụnyere.
N'abalị ahụ kara akara awa ojii ya jiri nwayọ na -egbu osisi n'ime ọkụ. Ugo nọ na -elele osisi maka ntuziaka maka ọgụ nke chi ọbụbọ, mana mmetụta anwansi ya apụtabeghị onwe ya, na -enweghị ozi sitere na nnukwu mmụọ Sioux.